स’मर्थन फिर्ता गर, राजीनामा आइहाल्छ : प्रधानमन्त्री ओलि:: Mero Desh
स’मर्थन फिर्ता गर, राजीनामा आइहाल्छ : प्रधानमन्त्री ओलि
Published on: २१ चैत्र २०७७, शनिबार ०७:५९
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई दिएको स’मर्थन फिर्ता लिएमा राजीनामा दिने बताएका छन् । शनिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूले राजीनामा माग्दैमा नदिने तर समर्थन फिर्ता लिएमा राजीनामा आउने बताएका हुन् । बालुवाटारमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन फिर्ता लिइदिन भनेको तर त्यसो नभएका ले राजीनामा नदिएको बताएका हुन् ।
आज मागेको हो र राजीनामा ? माग्या माग्यै छ त, मागै पिच्छे म कसरी दिनसक्छु राजीनामा ? एकदिन एउटा राजीनामा हुन्छ । एउटाले माग्दैन, दुइटाले माग्दैन, एकदिन माग्दैन, दुई दिन माग्दैन । माग्या माग्यै छ,’ ओलीले भने , ‘ए बाबा ! हटाउ न त । स’मर्थन फिर्ता लिइदेऊ भन्छु लिँदैन । अनि राजीनामा माग्छ । राजीनामा आइहाल्छ, स’मर्थन फिर्ता गर न । स’मर्थन फिर्ता पनि गर्दैन, अनि राजीनामा माग्छन् ।’
ओलीलाई दिएको स’मर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिए को छैन । ओलीले माओवादीतर्फ लक्षित गर्दै स’मर्थन फिर्ता नलिएकाले राजीनामा दिन नसकेको बताएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन माग गरेको थियो । त्यस्तै, उसले ओलीलाई हटाएर आफ्नो पार्टीको ने’तृत्वमा सरकार गठन गर्न अग्रसरता लिने पनि निर्णय गरेको थियो ।
ओलीले राजीनामाको समाचारलाई प्राथमिकता दिएको र सरकारले गरेका विकास नि’र्माणका कामलाई अगाडि नराखेको भनेर असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले जहिले पनि आफ्नो राजीनामालाई बढी प्राथमिकता दिइएको तर सडक नि’र्माण, मेलम्ची खानेपानी जस्ता परियोजनाका समाचार अगाडि नल्याएको भन्दै सञ्चारमाध्यमको आलो चना गरेका हुन् । ‘दिनैपिच्छे राजीनामा माग्छन्, दिनैपिच्छे त्यो समाचार छाप्छन् तर मेलम्चीको पानी आएको समाचा र छाप्दैनन्,’ ओलीको अ’सन्तुष्टि थियो ।
अ’संवैधानिक रूपमा प्र’तिनिधिसभा वि’घटन गरेपछि राजनीतिक दलहरूले सडकदेखि सदनसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने सर्वोच्चको प्र’तिनिधिसभा वि’घटनको नि’र्णय असंवै धानिक भनेर फैसला आउँदा पनि उक्त कदम सही थियो भनेर जिकिर गर्दै आइरहेका छन् । स्रोत कान्तिपुर